China LED Commercial Emergency Exit Light Combo Manufacture and Factory | Saselux
① [Nkọwapụta zuru ezu] A na-eme akara ngosi ọpụpụ ihe mberede nke ụlọ na-akpụzi thermoplastic ABS. Ọ nwere ọrụ voltaji abụọ nke 120V/277V. Na mmepụta bụ 4W max. Ngwakọta ihe nrịba ama ọpụpụ a nwere isi abụọ a na -agbanwe agbanwe.Ị nwere ike ịtụgharị isi ya n'akụkụ ọ bụla ịchọrọ. A na-ewukwa isi ọkụ ọ bụla na SMD LED na-enwu enwu, nwere ike mee ka ụzọ 100 pụọ. Ọ dabara maka ọnọdụ iru mmiri, mana ọ bụghị mmiri.
② [50000 Awa nke ndụ] Batrị 3.6V Nickel Cadmium ejiri mee ya na ngwakọta ọkụ ọkụ ọpụpụ mberede chọrọ awa 24 maka ụgwọ zuru oke. Na ụgwọ ọ bụla zuru oke nwere ike were nkeji 90 maka ọrụ mberede. Ndụ nke akara ọpụpụ a bụ awa 50000.
③ [Ndepụta UL edepụtara & ntinye nkeji 3] agafeela akwụkwọ mmado UL. Ihe nrịba ama akara ọpụpụ a bụ ọkọlọtọ America ma mezuo ihe chọrọ nke koodu ụlọ. Ị nwere ike jiri ya gafee nyocha ngalaba ọkụ. Ọzọkwa, akara ụzọ ọpụpụ a dị mfe ịwụnye, naanị ịchọrọ nkeji 3. Enwere ike ịtọ mgbidi na elu ụlọ. Agụnyere akụrụngwa na ngwa niile.
④ [Akwụkwọ ikike afọ 5] SASELUX na -enye akwụkwọ ikike afọ 5 maka akụkụ eletriki na ụlọ nke akara ngosi ọpụpụ mberede a, yana akwụkwọ ikike afọ abụọ maka batrị.
[Akụkọ SASELUX] SASELUX bụ ọkachamara na ọkụ mberede ihe karịrị afọ 20. Dị ka akara gburugburu, SASELUX etinyela aka na mmepe, mmepụta, ire na ọrụ ọkụ na ngwaahịa eletriki maka ahịa n'ụwa niile. Ụlọ ọrụ anyị nwere ndị injinia 38 maka imepụta ngwaahịa na usoro nrụpụta. SASELUX na -ere nde nde ngwaahịa elektrọnịkị kwa afọ. Ugbu a, anyị nọ ebe a maka gị, yana ngwaahịa kacha mma na ọnụ ahịa asọmpi.
Nke gara aga: Anwụrụ ọkụ anwụrụ ọkụ & mkpu CO nwere batrị afọ iri
Osote: CSA Green Running Man Light Sign Exit Sign
US Standard Commercial ikanam Emergency Wepụ Sign ...